ओ-मीक्रोन भाइरस पुष्टि भएका डाक्टरको रिपार्ट फेरि पनि पोजेटिभ, तेस्रो लहर आउने चेतावनी – List Khabar
Home / समाचार / ओ-मीक्रोन भाइरस पुष्टि भएका डाक्टरको रिपार्ट फेरि पनि पोजेटिभ, तेस्रो लहर आउने चेतावनी
ओ-मीक्रोन भाइरस पुष्टि भएका डाक्टरको रिपार्ट फेरि पनि पोजेटिभ, तेस्रो लहर आउने चेतावनी
admin December 19, 2021 समाचार Leaveacomment 73 Views
ओ-मीक्रोन भाइरस पुष्टि भएका डाक्टरको रिपार्ट फेरि पनि पोजेटिभ, तेस्रो लहर आउने चेतावनी !
भारतमा ओ- मीक्रोन भेरियन्ट फैलिएको प्रति इन्डियन मेडिकल एसोसियसन(आइएमए)ले चि`न्ता व्यक्त गरेको छ । समयमै कुने कदम नउठाए छिटै को- राना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुने चे-तावनी आइएमएले दिएको छ । नयाँ भेरियन्टबाट बच्न बुस्टर डोज खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
भारतमा हालसम्म नयाँ भेरियन्ट ओ-मीक्रोन २१ जनामा पुष्टि भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिलो ओ-मीक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भएका बैंग्लोरका डाक्टरको फेरि पनि पीसीआर पोजेटिभ आएको भारतीय मिडियाले जानकारी दिएका छन् । संक्रमण पुष्टि भएको ७ दिनपछि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ नै आएको एनडीटीभीले खबर दिएको छ ।
४६ वर्षीया यी डाक्टरलाई चिकित्सकको निगरानीमै राखिने रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म डिस्चार्ज नगर्ने निर्णय भएको छ । भारतमा पहिलो पटक कर्नाटकमा यी डाक्टरसँग अर्का ६६ वर्षीय वृद्धमा पनि ओ-मीक्रोन भेरियन्ट पाइएको थियो । नेपालमा पनि २ जनामा ओमीक्रोन भेरियन्ट देखा परिसकेको छ ।
Previous बच्चाको नाममा खोलिएको खातामा फिल्मी शैलीमा आयो करोडौँ रकम, त्यसपछि हुनेसम्म भयो
Next सपनामा कस्तो महिलालाई देखे कस्तो संकेत प्राप्त हुन्छ ? ज्योतिष शास्त्र यसो भन्छ जन्नुहोस